दुब्लाउन चाहनुहुन्छ ? टन्न भात खानुहोस ! - ।। Naya Kuro ।।
विकसित देशहरूमा शरीरको तौल घटाउन कार्बोहाइड्रेट न्यून भएको खानेकुरा खाने चलन बढी छ । यी देशमा भातको उपभोग पनि निकै कम छ । तर नियमित आहारमा भात अनिवार्य भएका जापानी र एशियाली खानाले मोटोपना घटाउन मद्दत गर्ने इमाइले बताइन् । भातमा पोटासियम म्यग्नेसियम, आइरन, फोलेट र फाइबर जस्ता पोषक तत्त्व अधिक मात्रामा हुन्छ ।
यसमा स्याचुरेटेड फ्याट र सुगरको मात्रा पनि कम हुन्छ । भातमा हुने पोषक तत्त्व र अन्य कम्पाउन्डका कारण पेट डम्म भरिएको आभास हुन्छ र धेरै खाने बानी रोक्न मद्दत गर्ने इमाइले बताइन् । ‘विश्वभर बढ्दो क्रममा रहेको मोटोपनाको स्तरलाई दृष्टिगत गर्दा पश्चिमा देशमा समेत मोटोपना घटाउन धेरै भात खान सुझाव दिन सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।
नियमित खानामा भात समावेशको कारण नै पश्चिमा देशको तुलनामा पूर्वी देशमा मोटोपना भएका मानिस कम भएको नेशनल ओबेसिटी फोरमका अध्यक्ष टाम फ्रेले पनि बताएका छन् । (एजेन्सीको सहयोगमा)
१६ चैत्र २०७५, शनिबार १५:५५ March 30, 2019 Naya Kuro
४ श्रावण २०७६, शनिबार १५:११ July 20, 2019 Naya Kuro